Ọ BỤRỤ ỌRỤ NA EXCEL - EXCEL - 2019
Ọrụ nke Microsoft Excel: ọrụ "Ọ BỤRỤ"
Ịgbanwe agba na Photoshop bụ usoro dị mfe, ma na-adọrọ adọrọ. Na nkuzi a, anyị ga-amụta ịgbanwe agba nke ihe dị iche iche na foto.
Ụzọ mbụ iji dochie agba bụ iji ọrụ zuru ezu na Photoshop "Dochie Agba" ma ọ bụ "Dochie Agba" na Bekee.
M ga-egosi gị ihe atụ kachasị mfe. Ụzọ a ị nwere ike ịgbanwe agba nke okooko osisi na Photoshop, yana ihe ọ bụla ọzọ.
Were akara ngosi ma mepee ya na Photoshop.
Anyị ga-eji dochie anya agba ahụ na agba ọ bụla na-amasị anyị. Iji mee nke a, gaa na menu "Image - Correction - Dochie Agba (Image - Ngbanwe - Dochie Agba)".
Igbe ntanetị agba na-egosi. Ugbu a, anyị ga-ezipụta ụdị agba anyị ga-agbanwe, n'ihi nke a anyị na-arụ ọrụ ahụ. "Pipette" ma pịa ya na agba. Ị ga-ahụ otú agba a na-egosi na igbe dị n'elu, nke akpọrọ dị ka "Mee ka".
N'ala ala "Mgbanwe" - n'ebe ahụ ma ị nwere ike ịgbanwe agba a họọrọ. Ma tupu ị nwee ike ịtọ ntọala ahụ "Ọcha" na nhọrọ. Ogo buru ibu, ihe ka ọ ga - ewepu agba.
N'okwu a, ịnwere ike itinye ya. Ọ ga-eweghara agba niile na oyiyi.
Hazie ntọala Swaps na agba - agba ịchọrọ ịhụ kama replaceable.
Emere m akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ site na itinye ntọala "Ụda ụda", "Saturation" ma "Ihè".
Mgbe ị dị njikere iji dochie akara - pịa "OK".
Ya mere anyị gbanwere otu agba na onye ọzọ.
Ụzọ nke abụọ dịka usoro atụmatụ, ọ nwere ike ikwu, dị ka nke mbụ. Ma anyị ga-ele ya anya na ihe osise siri ike karị.
Dịka ọmụmaatụ, ahọpụtara m foto na igwe. Ugbu a, m ga-egosi otu esi edochi agba nke ụgbọ ala ahụ na Photoshop.
Dị ka mgbe niile, ọ dị mkpa ka anyị dee ụdị agba anyị ga-eji dochie. Iji mee nke a, ị nwere ike ịmepụta nhọrọ site na iji ọrụ agba agba. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mee ka ihe ngosi dị na agba.
Gaa na menu "Nhọrọ - Gburugburu agba (Họrọ - Agba agba)"
Mgbe ahụ ọ na-anọgide na-pịa ụcha ọbara ọbara nke ụgbọ ala ahụ ma anyị ga-ahụ na ọrụ ahụ kọwaara ya - ese ya na-acha ọcha n'ime windo ahụ. Agba ọcha na-egosi nke akụkụ nke onyinyo a pụta ìhè. Agbanwe mgbanwe na nke a nwere ike gbanwee ka uru kachasị. Pịa "OK".
Mgbe ị kụrụ "OK", ị ga-ahụ otú e si kee nhọrọ ahụ.
Ugbu a ị nwere ike ịgbanwe agba nke onyinyo ahọrọ. Iji mee nke a, jiri ọrụ - "Image - Correction - Hue / Saturation (Image - Adjustments - Hue / Saturation)".
Tinye ozugbo nhọrọ "Tinye" (ala aka nri). Ugbu a na-eji ntinye "Ụdị, Saturation na Ìhè" nwere ike ịhazi agba. Eji m acha anụnụ anụnụ.
Ihe niile A na-agbanwe agba.
Ọ bụrụ na onyinyo ahụ nọgidere bụrụ akụkụ nke agba mbụ ahụ, a ga-emeghachi usoro ahụ ugboro ugboro.
Gbanwee ntutu isi na Photoshop n'ụzọ ọzọ.
Mepee onyinyo ahụ ma mepụta ebe nchekwa ọhụrụ. Gbanwee usoro agwakọta "Chroma".
Họrọ Azu ma debe ụcha achọrọ.
Weezie ebe ndị a chọrọ.
Usoro a dịkwa mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe agba anya na Photoshop.
Site na omume ndị dị otú ahụ dị mfe, ị nwere ike ịgbanwe agba agba na Photoshop, yana agba nke ihe ọ bụla, ma larịị na gradient.